Solar DC Mhepo Inotonhorera Fekitori | China Solar DC Mhepo Inotonhorera Vagadziri uye Vatengesi
Solar ndiyo nharaunda nyowani inoshamwaridzika simba, XIKOO inoteedzera tekinoroji yekuvandudza uye simba kuchengetedza uye kuchengetedza nharaunda, Yakagadziriswa uye yakaburitsa XK-05SY Inotakurika rezuva 24v DC mhepo inotonhorera. uye inotakurika evaporative mweya inotonhorera, iri nyore kufamba uye kuwedzera mvura. Chitarisiko Chakanaka Nyowani ABS ...
XK-06SY inotakurika rezuva renje DC mhepo inotonhorera fan
Solar ndiyo nharaunda nyowani inoshamwaridzika simba, XIKOO inoteedzera tekinoroji yekuvandudza uye simba rekuchengetedza uye kuchengetedza nharaunda, Yakagadziriswa uye yakaburitsa XK-06SY inotakurika rezuva gwenga DC mhepo kutonhora fan. uye inotakurika evaporative mweya inotonhorera, iri nyore kufamba uye kuwedzera mvura. Chitarisiko Chakanaka ...
XK-25 / 40C Solar hwindo 12 / 24v DC evaporative mweya inotonhorera
Solar ndiyo nharaunda nyowani inoshamwaridzika simba, XIKOO inoteedzera tekinoroji yekuvandudza uye simba rekuchengetedza uye kuchengetedza nharaunda, Yakagadziriswa uye yakaburitsa XK-25 / 40C solar simba DC mhepo inotonhorera. uye zvakare iri hwindo mhando evaporative mweya inotonhorera, ine mweya pombi uye mweya diffuser, inogona kuiswa ...